UMhlathuze Water uyiphethe kahle imali yabakhokhi bentela
ISIKHULU esiphezulu soMhlathuze Water, uMnuz Mthokozisi Duze, othi bathole umbiko ongenagcobho kumcwaningi mabhuku
Simphiwe Ngubane | November 26, 2019
ISIKHULU esiphezulu soMhlathuze Water, uMnuz Mthokozisi Duze, sibonge ukusebenza ngokuzikhandla kwabasebenzi benkampani kahulumeni ephakela ngamanzi emuva kokuthola umbiko womcwaningi-mabhuku jikelele ongenawo ugcobho.
UMcwaningi mabhuku omkhulu, uMnuz Kimi Makwetu, usanda kumemezela ukuthi kuhambe kahle ukuphathwa kwemali eMhlathuze Water onyakeni wezimali * -2018/19.
UDuze uthe bekuqala ngqa ukuthi amabhuku oMhlathuze Water acwaningwe yihhovisi likamcwaningi mabhuku-jikelele. Kusukela ngo-2016/17 umsebenzi bewenziwa yinkampani iKPMG.
“Phambilini umcwaningi mbhuku ubelokhu eveza ukungenziwa kahle komsebenzi, ukungaphathwa ngendlela efanele kwemali nokuhluleka ukuchaza ngemisebenzi eyenziwa yile nkampani. Sijabulile ukuthi kule minyaka emibili edlule sisiguqulile isimo sagcina sesithole umbiko ongenawo ugcobho,” kusho uDuze.
UMhlathuze Water ungowesibili ngobukhulu kweziphakela amanzi KwaZulu-Natal, ulandela uMngeni Water.
Baphakela amanzi abantu abakhele uMasipala iZululand, King Cetshwayo noMkhanyakude.
Iphakela amanzi futhi iqoqele izimboni ezinkulu nezimayini imfucuza okuyinto ebenze benza inzuzo enkulu.
Izikhulu zenkampani zithe alikho ikhasimende layo elinesikweletu esinesikhathi esingaphezu kwezinsuku eziwu-90 ngoba bayaqikelela uma beqoqa izikweletu.
UDuze uthe: “SiwuMhlathuze Water sinawo amandla, imali nezikhwepha zokuthi sikwazi ukuthi silekelelane nomasipala ukuze bakwazi ukusheshisa ingqalasizinda yamanzi emiphakathini. Nakuba ikhona ingqalasizinda ephakela amanzi komasipala kodwa amapayipi athatha amanzi ahlanzekile lapho esiwaphehla khona sesiwayisa kubantu awekho,” kusho uDuze.
UDuze uxwayise ngokuthi: “Uma kuwukuthi ayikho into esiyenzayo ukwakha amadamu amasha nezinto esizokwazi ukuthi silondoloze kuzo amanzi, ingakhona ingqinamba ngo-2024 uma singalwenzi uhlelo lokuthi mhlwawumbe amanzi asolwandle siwaphehle siwafake kwingqalasizinda nokuthi simpompe amanzi ngaphansi komhlaba ngohlelo lwamapitsi ukuze abantu bakwazi ukuthola amanzi.”